Fannaanadda Nasteexo Indho iyo fannaaniin kale oo show ku qabanaya Malta | Jubbaland Media Online
Fannaanadda Nasteexo Indho iyo fannaaniin kale oo show ku qabanaya Malta
Posted on April 16, 2016 in Arrimaha Bulshada, Feat, Wararka // 0 Comments
Sidda uu qoray Wargeyska The Times ee ka soo baxa Jasiiradda Malta, waxaa halkaas gaaray seddax ka mid ah fannaaniinta caanka ah ee Yurub.
Fannaaniintan ayaa u tagay Malta in ay ku qabtaan bandhig fanneed sidda uu sheegay Axmed Nuur Ibraahim oo ka mid ah qaban qaabiyaasha bandhig fanneedkan.
Fannaaniinta tagtay Malta waxaa ka mid ah Nasteexo Warsame oo ku caan ah Nasteexo Indhoos, Laki Cali Waceys iyo Suheyr Xirsi oo ku caan ah DJ Subeer.
Haddaba seddaxda fannaan oo ka kala yimid waddamada UK, Norwey iyo Sweden ayaa intii ay joogaan jasiiradda Malta waxay ku soo bandhiggi doonaan Show ama bandhig fanneed ay ka qeybgali doonaan jaaliyadda Soomaalida ee ku nool dalkaas.
“Waxaan rabnaa in dhammaan Soomaalida Malta ay ka soo qeybgalaan isla markaana ay ku madadaalaan bandhig fanneedkan, maxaa yeelay qaar badan waxay soo mareen marxalado adag marka waa in ay dareemaan farxad” ayuu yiri Axmed Nuur.
Fannaanada Lucky Cali, waxay ka immaaneysaa UK waa suxufiyad horre waxay sheegtay in ay aad u jecashay in Soomaalida ay dhiirigaliso isla markaana aaney iloobin waxa ay yihiin isla markaana ay isku dayaan in ay door ka qaataan nabadda iyo is qadarinta.
Lucky Cali waa 35-jir.
Waxaa kaloo ka mid ah fannaaniinta kale Nasteexo Warsame oo ku caan ah Nasteexo Indhoos waa 30 jir waxay Soomaaliya ka timid iyadoo shan jir ah waxay iyada iyo walaalkeed qaxooti ah ku tageen dalka Norway.
Si kastaba, bandhig fanneedka ayaa ka dhici doona Tiyaatarka City Theatre Workers Memorial Building on South Street, marka ay saacadda tahay 4pm.